९ कात्तिक, सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन भएको छ । प्रशासनले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगलाई तत्कालै बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
जिल्लामा मापदण्ड नपुगेका र प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगलाई गत वर्ष नै स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मापदण्ड पुरा नगरेका धरै क्रसर उद्योग अहिले पनि नवीकरणविना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा वाग्मती, लखन्देही, झिम, फुलजोर, कालीञ्जोर, चापिनीलगायत नदी गहिरिँदा पूर्वपश्चीम राजमार्गका पुल सङ्कटमा पर्न थालेका छन् ।
अव्यवस्थित उत्खननले खोला तथा चुरे संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको स्थानीयवासी रमेश अधिकारी बताउँछन् । यसरी जथाभावी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी क्रसर सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामाथि नै असर पर्न थालेको जानकारले बताएका छन् ।
साताको पहिलो दिन बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम करिब ७ अर्ब
काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको तयारी गरिएको छैनः देउवा
सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी, यस्तो छ आजको मूल्य ?
आजको सेयर बजार : ६.३ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार ९ अर्ब ३० करोडमा सीमित
भीम अस्पतालमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
अब के गर्लान् ओली ?: यस्ता छन् विकल्प
एमालेको दुवै हातमा लड्डु छ : प्रवक्ता गुरुङ
माधव समूहलाई नबोलाई एमाले जेठ २ मा फर्किने
कञ्चनपुरमा मृतावस्थामा फेला परे साधु